Knowledge Archives - Trading Myanmar Blog | Myanmar Advertising Agency | Ad Portal Blog
Min Thuta | Knowledge | September 27, 2020
တစ်ခါတစ်ရံမှာမိမိရဲ့ စီးပွားရေး ပညာရေး စတာတွေအတွက် ကြိုးစားဖို့စိတ်ပျက်အားလျော့နေတဲ့အခါ မိမိကိုယ်ကိုတွန်းအားပေးပြီးအကောင်းဆုံးကြိုးစားဖို့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေရှိသင့်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကပ်ရောဂါကာလမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပါဂရုစိုက်ဖို့လိုတာမို့ အခုဖော်ပြမဲ့နည်းလမ်းတွေထဲကအနည်းဆုံးတစ်ချက်တော့သင့်အတွက်အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်နေရတယ်လို့တွေးမိရင် နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုချက်ခြင်းစတင်ပါ။ကိုယ့်အတွက်မဖြစ်နိုင်တာကိုအချိန်ကုန်ခံပြီးစဉ်းစားနေမဲ့အစား နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုအတွက်အတွေးအမြင်အသစ်တွေရရှိဖို့အချိန်ပေးပါ။
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ရင်းစဉ်းစားပါ။ဒီနည်းလမ်းဟာဖြစ်နိုင်ပါ့မလားလို့တွေးမိကောင်းတွေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုပြုခြင်းဟာ လူကိုသွက်လက်ပေါ့ပါးစေရုံသာမက တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းကိုမြင့်စေပြီး အလုပ်အပေါ်ပိုမိုအာရုံစိုက်နိုင်အောင် ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
အဖြေရှာပါ။ မိမိရဲ့လုပ်နေတဲ့အရာဟာဘာကြောင့်နှောင်းနှေးနေသလဲအဖြေရှာပါ။ခက်ခဲနေတဲ့အရာကိုရှာတွေ့ပြီဆိုမှအလုပ်ဆက်လုပ်ခြင်းဟာအောင်မြင်ဖို့ပိုပြီးအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောက်တရားတွေကိုဖယ်ရှားပါ။မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးကိုဖယ်ရှားပြီး အလုပ်အပေါ်အာရုံစိုက်လိုက်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတစ်ယောက်ထဲအလုပ်အပေါ်အာရုံစိုက်နေတာထက်မိမိနဲ့စိတ်တူကိုယ်တူ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်နဲ့တွဲဖက်လုပ်ခြင်းဟာအလုပ်ကိုပြီးမြောက်စေဖို့အကြံကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
မိမိအလုပ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာအုပ်တွေဖတ်ခြင်းဖြင့်လည်း နည်းလမ်းကောင်း အကြံကောင်း အဉာဏ်ကောင်းတွေကိုစာဖတ်ခြင်းကနေတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်ပါတယ်။
English စာရေးတဲ့နေရာမှာလွယ်ကူလျင်မြန်ချင်ပါသလား ?
Min Thuta | Knowledge | September 15, 2020
Content တွေရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် Email ပို့တာ Report ရေးတာ စသဖြင့်လုပ်ငန်းခွင်မှာရော တခြား Writing ပိုင်းရေးသားတဲ့ သူတွေ အထူးသဖြင့် English စာရေးရတဲ့ သူတွေမှာ တခါတလေ Grammar အမှားတွေ၊ Spelling အမှားတွေ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုအခက်အခဲတွေကို တစ်ခုချင်းလိုက်ရှာပြီး စစ်ဆေးနေဖို့ ဆိုရင် အချိန်ပိုတွေကို ပေးရမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်
Min Thuta | Knowledge | August 31, 2020
သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ Lifestyle ကိုထိခိုက်စေမဲ့အမူအကျင့်ဆိုးတွေကတော့…
နေပူထဲကို ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကာကွယ်စေမယ့် အရာမပါပဲသွားလာခြင်း
Smart Phone စတာတွေကိုအိပ်ယာရဲ့အနီးအနား အထူးသဖြင့် ခေါင်းနားမှာထား၍အိပ်စက်ခြင်း
Weight ကျစေရန်အတွက် အစားမစားပဲနေခြင်း
မိမိရဲ့ကျန်းမာရေး လက္ခဏာ အပြင်ပိုင်း အတွင်းပိုင်းထူးခြားမှုတွေကို ဂရုမစိုက်ခြင်း
Covid 19 Pandemic ကာလမှာ မိမိနေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ကို သန့်ရှင်းအောင်ဘယ်လိုနေမလဲ ?
Min Thuta | Health, Knowledge | August 24, 2020
Corona virus ဟာ လူလူခြင်းကနေကူးစက်စေရုံသာမက အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ မျက်နှာပြင်တွေမှာပါ ရှင်ကျန်နေတဲ့ Virus တစ်မျိုးဖြစ်လို့ မိမိနေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပိုးကင်းစင်စေရေးအတွက် အထူးဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Corona Virus ကိုကာကွယ်ဖို့ မိမိနေထိုင်ရာ အိမ် သို့မဟုတ် အခန်း စသည်တို့ကို Environmental Cleaning လုပ်တော့မယ်ဆို ပထမဦးစွာ လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့
ကြမ်းတိုက်တံ MOP တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးစွာ လက်ကိုစင်ကြယ်အောင်ဆေးပြီး Mask တပ်ပါ လက်အိတ်ဝတ်ပါ။ မျက်နှာကို လက်နှင့်မထိမိစေရန် အထူးဂရုပြုပါ။
ပိုးသတ်ဆေး အစွန်းချွတ်ဆေးစတာတွေကို သုံးစွဲမဲ့ပမာဏအပေါ်မူတည်ပြီး မိမိသုံးမဲ့ Product ရဲ့အညွှန်းမှာပါတဲ့ အချိုးအစားတိုင်းရောစပ်ပါ။
လက်ကိုင်ပါတဲ့ ကြမ်းတိုက်တဲ့ Mop နဲ့ ကြမ်းပြင်တစ်ခုလုံးကို ပိုးသတ်ဆေးရည်အသုံးပြုပြီး ရေပုံးထဲကရေဖြင့် ပွတ်တိုက်ဆေးကြောပေးပါ။
အိပ်ရာခင်း စောင် လိုက်ကာစ စတဲ့အဝတ်တွေကို အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာမှုန်နဲ့လျှော်ဖွတ်ပေးပါ။
တစ်ကယ်လို့သင်မိသားစုဝင်ထဲက Corona virus သံယရှိခံရသူရှိနေပါက အဆိုပါသူအသုံးပြုခဲ့တဲ့ အသုံးအဆောင်တွေကို ပြန်လည်အသုံးမပြုပါနဲ့။
ကြမ်းတိုက်တာကို နှစ်ကြိမ်လောက် လုပ်ပေးပါ။
အသုံးပြုပြီးတဲ့ အဝတ် အမိှုက် စတာတွေကိုပလတ်စတစ်အိတ်နဲ့ နှစ်ထပ်လောက်ထုပ်ပိုးပြီးမှ လွှတ်ပစ်ပါ။
လက်အိတ်ကို စနစ်တကျချွတ်ပြီး လက်ကိုဆပ်ပြာနဲ့ဆေးကြောပါ။လက်အိတ်ချွတ် လက်ဆေးပြီး Mask ချွတ်ပါ။လက်တစ်ခါထပ်ဆေးပေးပါ။
အသုံးပြုပြီးတဲ့ Mask နဲ့ လက်အိတ်တွေကိုလည်း ပလတ်စတစ်အိတ်နဲ့ နှစ်ထပ်လောက်ထုပ်ပိုးပြီးမှ လွှတ်ပစ်ပါ။ အမှိုက်အိတ်တွေကိုချက်ခြင်းစွန့်ပစ်ပါ။
အကုန်ပြီးပါက ရေကိုအမြန်ချိုးပါ။ အဝတ်အစားအသစ်လဲပါ။
အားလုံးပဲ ပိုးမွှားကင်းစင်ပြီး ရောဂါဘယတွေကင်းဝေးပါစေ။
Min Thuta | Knowledge | August 11, 2020
ခံတွင်းနံ့မကောင်းတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးစေရုံသာမက လုပ်ငန်းခွင်မှာပါထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် လူအများနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံရာမှာ သင့်ခံတွင်းနံ့အရမ်းဆိုးရွားနေမယ်ဆို ဒါဟာကောင်းတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုခံတွင်းနံ့မကောင်းတာကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲဆိုရင်…
Min Thuta | Health, Knowledge | July 6, 2020
သံလွင်ဆီနဲ့ သံလွင်သီးဟာဆိုရင် သူ့ရဲ့ ဆေးဖက်ဝင်ပြီး ရောဂါကိုပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့အစွမ်းသတ္တိကြောင့် လူသိများထင်ရှားပါတယ်။ ဆေးဖက်ဝင်တဲ့ အသီးအနေနဲ့ကတော့ ထိပ်ဆုံးကနေနာမည်ကျော်ပါတယ်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရဆိုရင် သံလွင်ဆီ Extra Virgin ဖြစ်တဲ့ သံလွင်ဆီဟာဆိုရင်
Min Thuta | Knowledge | June 28, 2020
Minimalism တစ်နည်းအားဖြင့် အရိုးရှင်းဆုံး တတ်နိုင်သမျှ အနည်းဆုံး ချုံ့ပြီးနေထိုင်ခြင်းကို အရင်ခေတ်တွေကတည်းကလူအများစုလက်ခံနေထိုင်လာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုအခါမှာ Minimalism အငွေ့အသက်ဟာ တစ်ခေတ်ပြန်လာသောဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်လာပြီး နိုင်ငံတကာကလူတွေကိုများစွာလွှမ်းမိုးလာတဲ့ခေတ်ရေစီးကြောင်းသဖွယ်ဖြစ်နေပါတယ်။
Min Thuta | Knowledge | June 17, 2020
လူတွေထင်တဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိတာဟာ ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိလို့မဟုတ်ပါဘူး။ ယုံကြည်မှုရှိတဲ့လူတွေလဲ ကြောက်စိတ်ကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားနိုင်မလဲ
Min Thuta | Knowledge | June 1, 2020
စာအုပ်စင် သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးတစ်ခုရှိခြင်းဖြင့် မိမိနှစ်သက်ရာစာအုပ်တွေကိုထိန်းသိမ်းနိုင်စေရုံသာမက အခန်းကိုပါ အမြင်အာရုံဖမ်းစားနိုင်ပါတယ်။ရုံးခန်း ၊ သင်တန်းကျောင်း သို့မဟုတ် မိမိအိမ်မှာ စာအုပ်စင်ကို နေရာစားလဲသက်သာပြီး Smart ကျကျထားချင်သူတွေအတွက် အဆင်ပြေစေမဲ့ Idea လေးတွေဖော် ပြပေးပါမယ်။တစ်ချို့ Idea တွေကလွယ်ကူလို့မိမိကိုယ်တိုင် DIY လုပ်ရင်တောင်ရနိုင်တဲ့ Idea လေးတွေပါပဲ။
Covid – 19 outbreak ကာလမှာ အိမ်မှာ Active ဖြစ်နေစေဖို့အချက်များ
Min Thuta | Health, Knowledge | April 29, 2020
Covid 19 ကြောင့်အပြင်မထွက်ရပဲ Social Distancing လုပ်ပြီးအိမ်မှာပဲနေနေရတဲ့အခါ စိတ်ရောလူရောလေးလံထိုင်းမှိုင်းမှုတွေဖြစ်စေတဲ့အတွက် မိမိအိမ်မှာနေရင်း Active ဖြစ်စေမဲ့နည်းလမ်းတွေဖော်ပြပေးပါမယ်။
StayHome မှာ Detox Water နဲ့ကိုယ်တွင်းအဆိပ်အတောက်တွေဖယ်ရှားမယ်
by Min Thuta on October 7, 2020 -0Comments
Detox water ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်တွင်းကအဆိပ်အတောက်တွေကိုထုတ်ပေးပြီး အဆီလဲကျ အသားအရည်လဲလှစေရန်သောက်သုံးသင့်တဲ့ အရည်ပါ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိပဲ သဘာဝနည်းအတိုင်းအဆီကျလ...
by Min Thuta on September 15, 2020 -0Comments
Content တွေရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် Email ပို့တာ Report ရေးတာ စသဖြင့်လုပ်ငန်းခွင်မှာရော တခြား Writing ပိုင်းရေးသားတဲ့ သူတွေ အထူးသဖြင့် English စာရေးရတဲ့ သူတွေမှာ တခါတလ...
All times are GMT 6.5. The time now is 11:46 pm.